Noho izy io nandalo tao Thailand ka atahorana sao misy olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus no antony. Any Thaillande ihany koa anefa dia efa misy sambo goavana iray antsoina hoe MS Westerdam mitondra mpanao vakansy 1 450 sy ekipazy 800 mihitsoka noho ny ahiahy hatrany. 12 andro no nialany avy any Hong Kong, ary tsy nisy nety nanaiky ny hidirany tany aminy i Japon, Philippines, ary ny Nosy Amerikanina Guam. Nimenomenona kosa ireo matihanina amin'ny fandraharahana sy mpiseradia ao Nosy Be satria tokony ho efa noraisina mialoha ny fanapahan-kevitra. Fatiantoka goavana ara-toekarena ho an’ny sinoa ny fisian’ny Coronavirus, ary efa miantraika amin’ny firenena maro, anisany io endriny iray miseho aty amintsika io. Niteraka adihevitra moa ity toe-javatra tao Nosy Be ity.